Dream of World Power vs China’s Plan on USA |
Beijing said those targeted had “maliciously spread lies and disinformation,” denying charges that more than 1 million people have been locked up in prison-like reeducation camps.
China’s vision to conquer the world through Belt and Road Initiative (BRI) and the Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) along with resurrecting the old techniques what Soviet Union had tried in the past. Details in Burmese for Burmese readers.
တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ထိပ်တန်းအကြံပေးတဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူ ဘေဂျင်းက Renmin တက္ကသိုလ် International Studies School ရဲ့ ဒု-ကျောင်းအုပ် Jin Canrong က အမေရိကန်ကို ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အကျအနရေးဆွဲထားတဲ့ စီမံကိန်းတခုကို ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လက တရုပ်ပြည်တောင်ပိုင်း ဂွမ်ဂျိုမြို့က ဟောပြောပွဲတခုမှာ ချပြလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တရုပ်သမ္မတရှီဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း တရုပ်ပြည်က အမေရိကန်ကို ကျော်ပြီး ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်နေရာကို ရယူဖို့ မျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းမှာ အမေရိကန်တွေကို အင်အားလျော့နည်းသွားစေဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အချက် ၄ချက်ပါဝင်ပြီး တချိန်ထဲမှာပဲ တရုပ်ပြည်ကို အင်အားတောင့်တင်းအောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက် အချက် ၄ချက် ပါဝင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အင်အားချိနဲ့အောင် တရုပ်အစိုးရက ကြိုးပမ်းရာမှာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပကပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိုးနှက်သွားဖို့ စီစဥ်ထားပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အမေရိကန်ကို အမှားတွေ လွယ်လွယ်လုပ်မိမယ့်အခြေအနေမျိုး ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့တော့ သူ့ပြဿနာနဲ့သူ လုံးချာလည်လိုက်နေရင်း ကြာလာရင် စိတ်ဓါတ်ကျလာပြီး လက်လျော့အရှုံးပေးစေဖို့ပါ။ တတိယအနေနဲ့တော့ အမေရိကန်တွေထဲကို ထိုးဖောက်ပူးပေါင်းထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါမှ အမေရိကန်တွေ တရုပ်ပြည်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ မလုပ်မှာပါ။ (အခုဘိုင်ဒန်နဲ့ ဩဇာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အိပ်ထဲထဲ့ထားတော့ တရုပ်အစိုးရကို စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားဘူးဖြစ်နေကြတာ အဲဒီသဘောပဲဖြစ်မှာပါ။) တရုပ်အစိုးရအနေနဲ့ အဖက်ဖက်က အင်အားကြီးတဲ့ အမေရိကန်ကို ဖြိုဖို့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ဗျူဟာ ၄ခု ချပြထားပါတယ်။
၁။ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ဝင်နှောက်ခြင်း
အမေရိကန်မှာ လူဦးရေ ၃၁၂သန်းရှိပြီး မဲဆန္ဒနယ် ၄၃၅ရှိတာကြောင့် မဲဆန္ဒနယ်တခုကို လူ ၇သိန်းခွဲနေထိုင်တယ်လို့ အကြမ်းဖျဥ်း ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက ၃၀% လောက်ဖြစ်တဲ့ ၂သိန်းလောက်က မဲပေးကြပြီး ကိုယ်စားလှယ်ချင်းကြား ပုံမှန်အားဖြင့် မဲကွာခြားမှုက တသောင်း(သို့) တသောင်းအောက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ တရုပ်ပြည်က မဲထောင်နဲ့ချီပြီး ကိုင်ထားလိုက်ရင် ပွဲပြတ်ပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ အောက်လွှတ်တော်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ပါ။ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာတော့ အောက်လွှတ်တော်ကို ငွေနဲ့ပေါက်ဝယ်ယူပြီး တရုပ်အစိုးရက သူတို့လိုချင်တဲ့ ဥပဒေရေးခိုင်းပြီး တံဆိပ်တုံးထုလက်မှတ်ထိုးရုံလုပ်ပေးရတဲ့ တရုပ်လွှတ်တော်လိုမျိုး နောက်တခုဖြစ်လာအောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ။
၂။ အမေရိကန်စျေးကွက်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
အမေရိကန်မှာ တရုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးမြှင့်ခြင်းက တရုပ်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ CCP တို့ကို အကျိုးဖြစ်စေရုံတင်မက အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်အပေါ်မှာပါ ဩဇာသက်ရောက်မှု ရှိစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်စျေးကွက်က ဂျပန်တို့ ဥရောပတို့နဲ့ယှဥ်ရင်တောင် ပိုမိုပွင့်လင်း တည်ငြိမ်တဲ့အတွက် ခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့ အခွင့်အရေးက တော်တော်ကောင်းနေတာပါ။ တရုပ်အစိုးရကတော့ သူတို့စီးပွားရေးသမားတွေကို အမေရိကန်စျေးကွက်ကို ထိန်းချုပ်စေချင်နေပါတယ်။ (အခု မြန်မာပြည်မှာ မအလတပ်ကလဲ အဲဒီလိုပဲ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။) အဲဒီလိုဖြစ်လာဖို့ တရုပ်အစိုးရက ဝါရှင်တန်နဲ့ Bilateral Investment Treaty (BIT) စာချုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတာ ၂၀၀၇-၂၀၁၇အထိပါပဲ။ ထရမ့်တက်လာပြီးနောက်မှ သူတို့အကြံ ချောင်ထိုးခံလိုက်ရတာပါ။ တရုပ်စျေးကွက်ကို ဝင်ချင်တဲ့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတချို့နဲ့ US-China Business Council ကတော့ BIT ထိုးဖို့ မဲဆွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၃။ အမေရိကန်ရဲ့ ရန်သူတွေကို မွေးမြူပျိုးထောင်ပေးခြင်း
တရုပ်ရဲ့ဗျူဟာက အမေရိကန်မှာ ရန်သူ ၄ဦးထက်မနဲ ရှိနေအောင် လုပ်ထားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက နာဇီနဲ့ ဆိုဗီယက် ရန်သူ ၂ဦးသာ ရှိခဲ့တာကနေ ၄ဦးသာရှိခဲ့ရင် အရင်းအမြစ်တွေ ခွဲဝေနေရတာထားဦး၊ ဘယ်ရန်သူကို ဦးစားပေးတိုက်ရမယ်ငြင်းခုံနေတာနဲ့တင် တော်တော် ဗျာများပြီး ဦးတည်ချက် ပျောက်သွားမှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၆က သုံးသပ်ချက်မှာတော့ အမေရိကန်တွေမှာ ရန်သူ ၃ဦးတော့ ရှိနေပါတယ်၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ ရုရှားနဲ့ တရုပ်ပေါ့။ နံပါတ်၄ ရန်သူအဖြစ် တရုပ်က ဘရာဇီးကို ပါစေချင်ပြီး အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်လာဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးခဲ့ပေယ့် ဘရာဇီးမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်မလာတာကြောင့် လက်လျော့ခဲ့ပြီး နောက်ရန်သူဖြစ်လာနိုင်မယ့်သူကိုသာ ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (တကယ်တမ်းက ထရမ့်လက်ထက်မှာ အကြမ်းဖက်တွေကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး ရုရှားကပါ ရှိန်နေခဲ့တာကြောင့် ရန်သူတဦးကိုသာ အာရုံစိုက်ဖို့ လိုခဲ့တာပါ။)
၄။ အမေရိကန်အတွက် နိုင်ငံတကာမှာ ပြဿနာတွေဝိုင်းနေအောင် ဖန်တီးပေးခြင်း
အမေရိကန်က ကမ္ဘာ့ပုလိပ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကမ္ဘာမှာ ပြဿနာတက်တိုင်း ဒေသ/ကမ္ဘာ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဝင်ပါရတဲ့အတွက် အမေရိကန်အရင်းအမြစ်တွေကို သုံးစွဲရတဲ့အပြင် တရုပ်ပြည်အပေါ် အာရုံစိုက်မှု လျော့ကျသွားနိုင်တာကြောင့် ဒီနေရာမှာတော့ တရုပ်ပြည်က ဗျူဟာပိုင်းအားသာချက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ အာဖဂန်နဲ့ အီရတ်စစ်ပွဲတွေက အမေရိကန်တွေအတွက် ဗျူဟာပိုင်းမှာ ဘာမှ အရေးမပါပေမယ့် အဲဒီစစ်တွေကို တိုက်လိုက်ခြင်း ကြောင့် ဒေါ်လာ၆ထရီလီယံနဲ့ စစ်သားတသောင်းကျော်ရဲ့ အသက်တွေ ပေးဆပ်လိုက်ရတာပါ။ အဲဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့ အမေရိကန်တွေ ၁၀နှစ် အချိန်ဖြုန်းခဲ့ချိန်မှာ တရုပ်ပြည်က အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ကို အင်အားချိနဲ့အောင်လုပ်နေချိန်မှာပဲ တရုပ်အစိုးရရဲ့ အာဏာစက်ကို ကြီးထွားအားကောင်းလာအောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ Jin က အဆိုပြုထားပါတယ်။ တရုပ်အစိုးရဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်၄ခုလုံးမှာ အမေရိကန်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ် မှီပြီး သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်အစိုးရရဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ အင်အားချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် Jim ရဲ့ ချဥ်းကပ်ပုံက ၄မျိုးပါ။
၁။ အမေရိကန်နည်းပညာများ ခိုးယူခြင်း
တရုပ်ပြည်က အချိန်တိုအတွင်းမှာ ခုလောက်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာလည်း အမေရိကန်နည်းပညာတွေ ခိုးယူထားတာကြောင့်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်၃၀အတွင်းမှာ တရုပ်က သုံးနေတဲ့နည်းပညာတွေရဲ့ ၄၆%ကို ဂျာမဏီက ဝယ်ခဲ့ရတာပါ။ အမေရိကန်နည်းပညာတွေက ပိုကောင်းပေမယ့် တရုပ်ပြည်ကို မရောင်းချကြပါဘူး။ တရုပ်ထုတ် J-20 တိုက်လေယာဥ်နဲ့ DF-41 တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်တွေက အမေရိကန်တွေဆီက ခိုးထားတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်ထားတာပါ။ တရုပ်အစိုးရက အမေရိကန်တွေရဲ့ အာကာသနည်းပညာကိုလည်း အလွန်အမင်းလိုချင်နေတာပါ။ ၂၀၁၆ ဇွန်လတုန်းက တရုပ်က အာကာသထဲကအမှိုက်တွေ ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ Long March7ဒုံပျံကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲ လွှတ်တင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းက အမှိုက်ရှင်းဖို့ထက် အာကာသထဲက အမေရိကန်ဂြိုလ်တုတွေကို လိုက်ကောက်ပြီး တရုပ်ပြည်ကို ပြန်သယ်လာကာ တစစီဖြုတ်ပြီး တရုပ်ဂြိုလ်တုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့က အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
၂။ တရုပ်ပိုင်နက်ကို ချဲ့ထွင်ခြင်း
Jim က တရုပ်အစိုးရက တောင်တရုပ်ပင်လယ်တခုလုံးနဲ့ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံကို မကြာခင် သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့လည်း ယုံကြည်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာတရားရုံးက တောင်တရုပ်ပင်လယ်ကို တရုပ်က ပိုင်တယ်လို့ ပြောနေတာဟာ ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် တရုပ်ကတော့ နောက်ဆုတ်မယ့်ပုံမရှိပါဘူး။ တောင်တရုပ်ပင်လယ်မှာ ငါးဖမ်းခြင်း၊ အဖိုးတန်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ရှိနေနိုင်ခြင်းတို့အပြင် ကမ္ဘာမှာ အဓိကကျတဲ့ ရေကြောင်းလမ်းတခုလည်း ဖြစ်နေတာကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်းနဲ့ တိုင်ဝမ်တို့ကလည်း သူတို့လည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောဆိုထားကြပါတယ်။
တရုပ်က တောင်တရုပ်ပင်လယ်ကို သူပိုင်ကြောင်း ပြတဲ့အနေနဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ တနှစ်ခွဲအတွင်းမှာ ဧက ၃၂၀၀ကျော်ရှိတဲ့ လူလုပ်ကျွန်းများ ဆောက်ပြီး စစ်စခန်းတွေ ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ (အာဏာရှင်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဗူးပေါက်တာမသိချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲလိုချင်တဲ့ တလွဲစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဖုတ်ပူမီးတိုက်ဆောက်လိုက်တဲ့ အင်မတန်အကုန်အကျများတဲ့ ကျွန်းတုတွေက အခုဆို တဖြည်းဖြည်း ရေထဲမြုပ်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။)
တိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တရုပ်လက်အောက်ကို ရောက်လာအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားများကို လာဘ်ထိုးခြင်း၊ တရုပ်ပြည်သူတွေ တိုင်ဝမ်ကို လည်ပတ်ခြင်းနဲ့ ကုန်သွယ်ခြင်းများကို တားမြစ်ခြင်း၊ တိုင်ဝမ်အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနည်းငယ်သောနိုင်ငံများကို တရုပ်ပြည်ဖက် ပါလာအောင် နားချခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစည်းအဝေးများသို့ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း၊ တိုင်ဝမ်သားတချို့ကို သတ်ပြခြင်းဖြင့် တိုင်ဝမ်ပြည်သူများကြား အကြောက်တရားဖန်တီးပေးခြင်း အစရှိတဲ့ နည်းမျိုးစုံကို သုံးပြီး ထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ Jim က ဆိုပါတယ်။
၃။ ကမ္ဘာမှာ တရုပ်ဩဇာတည်ဆောက်ဖို့ ပရောဂျက်တွေမှာ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍရယူခြင်း
ကမ္ဘာမှာ တရုပ်အာဏာတည်ဆောက်ဖို့ကိုတော့ Belt and Road Initiative (BRI) နဲ့ the Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) ဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင် ၂ခုပေါ်မှာ အခြေတည်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ BRI က အာရှ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနဲ့ တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေအပေါ် စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့အတွက် ၂၀၁၃မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းအကြီးစားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ BRI ကို အမေရိကန်နဲ့ အချို့နိုင်ငံတွေကတော့ ကြွေးမြီထောင်ချောက်diplomacy လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။ BRI ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စက်မှုထွန်းကားတဲ့ ဂျာမဏီနဲ့ BRI နိုင်ငံတွေ ပေါင်းပြီး အမေရိကန်တွေအတွက် နေရာမရှိအောင်လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ FTAAP ကလည်း အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသက ၂၁နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် ပြုလုပ်ပြီး တရုပ်ဩဇာလွှမ်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ နည်းလမ်းတခုပါပဲ။ တရုပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ the New Development Bank နဲ့ the Asian Infrastructure Investment Bank စတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွေကလည်း သူတို့ဆီက ငွေချေးယူတဲ့နိုင်ငံတွေကို တရုပ်အစိုးရဩဇာခံအဖြစ်ရောက်အောင် လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ Jim က ယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့က ဒါတွေကို မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်၊ အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်းအားနဲ့ အမေရိကန်ထက် အင်အားကြီးဖို့ မျှော်မှန်းထားပြီး သူတို့ကသာ ကမ္ဘာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ (ခုထိတော့ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းဆိုတာတွေက အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ၊ မဲခိုးပြီး တက်လာတဲ့ ဟန်ပြ ဒီမိုကရေစီတွေ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားတွေ ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။)
၄။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဝင်ရောက်ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်း
Jim က ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ UN, WTO, WHO, Interpol, IMF, IOC, OECD စတာတွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်သွားဖို့ စီမံကိန်းချထားကြောင်း၊ တရုပ်စကားပြောတတ်သူတွေ (တရုပ်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြုသူတွေ)ကို အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဦးဆောင်ရန် ခန့်အပ်သွားနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှီတက်လာတဲ့ ၂၀၁၂တုန်းက တရုပ်ပြည်ကို ၂၀၂၁မှာ အလယ်အလတ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြည်သူတွေကို တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ၂၀၄၉မှာ အင်အားကြီး၊ လွပ်လပ်၊ ယဥ်ကျေး၊ သဟဇာတဖြစ်ပြီး ခေတ်မှီတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ တနည်းအားဖြင့် ၂၀၄၉မှာ အမေရိကန်ကို ကျော်ပြီး ကမ္ဘာမှာ တခုတည်းသော ဆူပါပါဝါဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
** ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတော့ ကွန်မြူနစ်တရုပ်ကို အထင်ကြီးချင်ကြတဲ့သူများကို ပြောချင်တာက အမေရိကန်ကို အင်အားချိနဲ့အောင်လုပ်တဲ့ အစီအစဥ်က တရုပ်က စတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၆၃ထဲက ရုရှားနဲ့ ကွန်မြူနစ်လိုလားသူတွေ ရေးဆွဲထားတဲ့ အချက် ၄၅ချက်ပါ စီမံကိန်းထဲက အချက်တွေပါပဲ။ အဲဒါနောက်မှ သပ်သပ်တင်ပါမယ်။ အခုအမေရိကန်မှာ ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ ဘယ်လောက်တောင် ခရီးပေါက်နေပြီလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သွားမှာပါ။**
Crdit to: Tin Omma Myo
« အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ဆို့မှု ဘယ်နေရာတွေမှာ ထိခိုက်နစ်နာနေသလဲ Security Council Arria formula meeting on Myanmar »